Maamulka Degmada Luuq oo meel Fagaare ah ku soo bandhigay Al shabaab shacabka qarxin rabay+Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Maamulka Degmada Luuq oo meel Fagaare ah ku soo bandhigay Al shabaab...
Maamulka Degmada Luuq oo meel Fagaare ah ku soo bandhigay Al shabaab shacabka qarxin rabay+Sawirro
Muqdisho (SONNA) Maamulka Degmada Luuq ee Gobolka Gedo ayaa maanta meel fagaare ah shacabka ku nool degmadaasi ugu soo bandhigay Maleeshiyo ka tirsan Argagaxisada Al shabaab oo doonayay in qaraxyo ay ku halaagaan nolosha shacabka aan waxba galansan.
Ciidamada Xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland ayaa howlgalo ay ka sameeyeen degmada Luuq iyo deegaanada ku dhow dhow waxay dhawaan kusoo qabteen ragan Al shabaab ka tirsan oo ku guda jira diyaarinta weeraro qaraxyo ah oo ay doonayaan inay ku xasuuqaan shacabka.
Maleeshiyadii la soo bandhigay oo kala ahaa Cali Cabdi Mursal iyo Maxamed Cabdi Saalax ayaa shacabka hortooda ka qirtay in ay ka tirsan yihiin Al shabaab, isla markaana ay qorsheynayeen inay dhibaato geystaan.
Maamulka degmada Luuq iyo Saraakiil kale oo goobta ka hadlay ayaa u mahad celiyay ciidamadii howlgalada ku soo qabtay ragan doonayay inay qarxiyaan shacabka, waxayna balanqaadeen in cadaalada la marsiin doono.
Tan iyo markii madaxda dalka ay ku dhawaaqeen in Nabad diidka guud ahaan dalka laga ciribtiro, waxaa sii kordhay howlgalada iyo dagaalada lagu burburiyay Saldhigyo Al shabaab leeyihiin, sidoo kalena gacanta lagu dhigay Dagaalyahano dhowr ah, iyadoo la dilay qaar kale oo badan, waxayna talaabooyinkan farxad galineysaa shacabka Soomaaliyeed oo fahmay dhagarta argagaxisada, isla markaana kaalin weyn ka qaata sidii loo burburin lahaa iyagoo wada shaqeyn dhow la yeeshay ciidamada amaanka.
Previous articleWarbixin:-Bil kadib Qaraxii Zoope, Maxay Bulshadu ka baratay ?
Next articleTaliska Booliska Soomaaliyeed oo soo Bandhigay Sanaadiiq loogu tala galay Cabashada dadweynaha